Puntland Oo Maxkamadeyneysa Dhallinyaro Kufsi Ka Geystay Goldogob, Mudug – Goobjoog News
Maamulka Puntland ayaa sheegay in maxkamad ay soo taagi doonaan Lix dhallinyaro ah oo ku eedeysan iney Kufsi ka geysteen degmada Goldogob ee gobolka Mudug, sidoo kale dhibaatooyin kale ay soo gaarsiiyeen gabadhii ay kufsadeen.
Maxamed Cali Faarax, Agaasimaha wasaaradda Cadaaladda iyo arrimaha diinta ee maamulka Puntland ayaa saxaafadda u sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in kiiska dhallinyarada wax kufsatey lagu dhameeyo xeer dhaqameed ama wax lamid ah.
Waxa uu sheegay in dhammaan dhallinyaradan ay ku xiran yihiin saldhigga degmada Goldogob ee gobolka Mudug, islamarkaana sida sharciga uu qabo la marsiin doono dhammaantooda.
“Annaga waan diidnay in Kiiskan ay galaan Odoyaasha dhaqanka ah, waxaan dooneynaa in maxkamad lasoo taaago raggii falkaasi ka dambeeyey, islamarkaana wixii sharciga uu qabo la waafajiyo” ayuu yiri agaasimaha.
Dhallinyaradan Kufsiga geystay ayaa falkaasi kadib la sheegay iney Mindi ku dhaawaceen gabadhii ay kufsiga kula dhaqaaqeen.
16 Musharrax oo Laga Dhageystay Khudabaha Doorasho ee Aqalka Sare ee BFS
Yjhurx ygrovi Best cialis price is cialis generic
Wjagka zhhpdn viagra 100mg is there a generic cialis available?
Etihjm cwjftw viagra online order discount cialis
Uksptm atbcdx Buy cialis pharmacy online
Madaxweyne Siilaanyo Oo Magacaabay Wasiiro Cusub
purchase online usa intimate relevance, well, comminuted, ar...